Gadziridza Apple ID Zvirongwa Pane iPhone? Hezvino Zvazvinoreva uye Zvekuita - Iphone
iphone 6s skrini inogona kuchinjwa
anodikanwa zvinoreva mubhaibheri
internet makambani epamba
zvinodiwa kutenga imba muUnited States
kana mukomana achikutarisa ari kure
Gadziridza Apple ID Zvirongwa Pane iPhone? Zvazvinoreva uye Zvekuita!
Yako iPhone inoti 'Gadziridza Apple ID Zvirongwa' uye iwe unoda kudzinga ziviso. Zvisinei nezvaunoita, haugone kuratidzika kunge wakatsvuka, denderedzwa '1' kuti utsakatike. Ndichakubatsira gadziridza Apple ID marongero pane yako iPhone uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko kana meseji iyi isingaendi .
Sei iPhone Yangu Ichiti 'Gadziridza Apple ID Zvirongwa'?
Yako iPhone inoti 'Gadziridza Apple ID Zvirongwa' nekuti unofanirwa kusaina muApple ID yako zvakare kuti urambe uchishandisa mamwe masevhisi eakaundi. Kugadziridza Apple ID masetingi kunokutendera iwe kuti urambe uchishandisa iwo masevhisi. Kazhinji yenguva, izvi zvinongoreva kuti unofanirwa kuisazve yako Apple ID password pane yako iPhone!
Zvaunofanira Kuita Kana Ichiti 'Gadziridza Apple ID Zvirongwa' Pane Yako iPhone
Vhura iyo Zvirongwa app uye tinya pa Gadziridza Apple ID Zvirongwa . Wobva wadzvanya Enderera pachiratidziri chinotevera. Pinda yako Apple ID password kana iyo pop-up ichioneka pachiratidziri.
iphone yekubata screen inoitisa kumusoro
Kazhinji yenguva, ziviso ye 'Gadziridza Apple ID Zvirongwa' ichaenda mushure mekunge mapinda password yako yeApp ID. Zvisinei, muzviitiko zvisingawanzoitiki, chiziviso hachizonyangarika, uye unogona kutogamuchira pop-up ichiti kukanganisa kwakaitika. Ramba uchiverenga kuti udzidze kugadzirisa dambudziko iri!
Is 'Gadziridza Apple ID Zvirongwa' Zvakanamatira?
Nehurombo, iwe zvimwe wawana ichi chinyorwa nekuti meseji Gadziridza Apple ID Zvirongwa yakanamirwa muna 2020. Kana iri pesky ziviso meseji yakanamatira pane yako iPhone, ingangoita nekuti yako Apple ID haigone kuverengerwa. Nditende - hausi iwe woga unotarisana nedambudziko iri!
Nhengo zhinji dzedu iPhone inobatsira Facebook boka yakaunza iyi nyaya kwatiri, ndosaka taida kukunyorerai chinyorwa ichi. Tevedza nhanho dziri pazasi kuti uongorore uye gadzirisa iyo chaiyo chikonzero nei iyo Yekuvandudza Apple ID Zvirongwa ziviso isingaende!
Ita shuwa kuti Wakanyorerwa Mukana Apple ID
Zvinogoneka kuti yako Apple ID haigone kuverengerwa nekuti iwe wakapinda mune imwe Apple ID account uye nekudaro uchipinda isiriyo password. Vhura iyo Zvirongwa app uye tinya pazita rako kumusoro kwechiso kuti nekukurumidza uve nechokwadi chekuti wapinda muiyo chaiyo Apple ID. Iwe uchaona iyo ID yeApple yawakatopinza padyo nepakati pekona.
app chitoro app isipo pane iphone
Tarisa uone chinyorwa chedu kana uchida rubatsiro kuchinja yako Apple ID !
Saina Uye Wodzokera Mune Yako Apple ID
Kana iwe ukasaina muiyo chaiyo ID yeApple, edza kusaina uye dzokera mairi. Dzokera kuZvirongwa -> Apple ID uye peta nzira yese kusvika pasi Buda . Pinda yako Apple ID password uye tap Dzima .
Tevere, tinya Buda mukona yekumusoro-kurudyi kona yekona. Kana iwe uchida kuchengeta kopi yeApple News yako kana mamwe marongero, batidza switch irudyi kwechinhu chiri pasi Chengeta Kopi Ye. Simbisa chisarudzo chako nekutepa Buda apo pop-up inoonekwa.
iphone 6 skrini yakaenda nhema
Iye zvino zvawakasaina kubuda, pombi Saina ku iPhone yako padyo nepamusoro peiyo App yezvirongwa. Pinda email yako yeApple ID uye password, wobva wadzvanya Nyorera mu mukona yekumusoro-kurudyi kwekona kuti usayine zvakare muICloud. Kana iwe uchinge wakurudzirwa kuti ubatanidze data rako neICloud, ini ndinokurudzira kubaya merge, kungoita shuwa kuti usarase chero ruzivo rwakakosha
Makorokoto - iwe wakasainwa muICloud zvakare! Kana iyo Gadziridza Apple ID marongero ari zvakadaro kuratidza kumusoro, enda padanho rekupedzisira.
Tarisa iCloud Services
Zvinokwanisika kuti ichi chiziviso chakanamatira nekuti iCloud masevhisi akave akaremara kwenguva pfupi kuitira kugara achigadzirisa kana kugadzirisa system. Kana izvi zvikaitika, unogona kudzivirirwa kupinda muApple ID yako sedziviriro. Unogona tarisa Apple mamiriro ehurongwa pane yavo webhusaiti!
nhare yekuvandudza yakatadza iphone 7
Apple ID Zvirongwa: Kusvika Kusvikira!
Zvirongwa zvako zveApple ID zviri zvenguva uye chiziviso chinogumbura chaenda izvozvi. Inotevera nguva painoti Gadziridza Apple ID Zvirongwa pane yako iPhone, iwe unozoziva chaizvo zvekuita! Kana iwe uine chero mimwe mibvunzo nezve yako Apple ID, inzwa wakasununguka kusiya chirevo pasi pazasi.